UMark Gurman ucebisa ukuba iApple yenze enye into ngoku kunye "engenamsebenzi" Apple TV | Ndisuka mac
UMark Gurman ucebisa ukuba iApple ibe yenye indlela ye-Apple TV yangoku kwaye "engenamsebenzi"
Kubonakala ngathi i-Apple ngokucacileyo ayinazicwangciso ziphambili ze-Apple TV kungekudala. Ke ubuncinci inokufundwa kwingxelo apho abayili bendalo kunye nolwakhiwo lwabo, iinjineli, zibonisa ukungabi nathemba malunga nesi sixhobo. Kunyaka ophelileyo, iApple yenze utshintsho olukhulu kwimigca yeemveliso zayo, nangona utshintsho olwenziwe kule ngokukodwa lunokuxoxwa. Olona tshintsho luphambili kwi-Apple TV yayihlaziya ifayile ye- Siri kude kuguqulelo olusebenziseka lula ngakumbi. Ukuphoxeka. Kodwa kubonakala ngathi ayiphucuki.
Okokugqibela imbumbulu "Ukuvula amandla" kwiBloomberg, Incoko kaMark Gurman kunye neenjineli zeApple zibonisa ukuba akukho themba lincinci ngesicwangciso sika-Apple sokuba isixhobo kufuneka sibe kumakhaya onke, ubuncinci kunyaka olandelayo. Kuyadanisa ukubona isicwangciso senkampani kwicandelo laso lokonwabisa, iApple TV +, iyakhula kwaye ibalulekile. Yintoni encinci kunokuba nesixhobo esifanelekileyo kunye nolindelo kunye nomgangatho womxholo.
Incoko kaMark Gurman kunye neenjineli abashiyi ndawo yokuthandabuza: "Ukusukela ngoku, kunzima ukukholelwa ukuba izakwenzeka nanini na kungekudala." "Ngokukodwa iinjineli zeApple zindixelela ukuba inkampani ayinaso isicwangciso esomeleleyo segumbi lokuhlala kwaye akukho themba lingaphakathi."
Ngamazwi kaGurman malunga nendlela iApple TV ngoku sisixhobo "esingenamsebenzi". "Ayikho enye into ngaphandle kwebhokisi ephezulu enexabiso eliphezulu kwimarike elawulwa yiAmazon neRoku." Ewe, ayikokugxeka okwenzakalisayo okwenziwa nguMarko. Wongeza ukuba inkampani inokwenza intonga engabizi kakhulu njenge-Apple TV, okanye yazise izinto ezintsha ukuqinisekisa ixabiso esele likho.
Ndiyathemba ukuba u-Apple uza kuyifunda le ncwadana kwaye athathe isigqibo sokuba uluvo lukaMarko luhle kwaye luya kusomeleza isixhobo. ilahlekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UMark Gurman ucebisa ukuba iApple ibe yenye indlela ye-Apple TV yangoku kwaye "engenamsebenzi"
Apple ukuvula iVenkile entsha yeApple eWuhan ngoSeptemba
UApple ufuna abasebenzisi abaninzi ukuvavanya ii-betas zikawonke-wonke